Wasiir M Dhabancad: “Waxaan xoojineynaa oo haddana dhiirigalineynaa dadaalka nabadda ee ay wadaan dadka deegaanku” (dhegayso) – Radio Daljir
Wasiir M Dhabancad: “Waxaan xoojineynaa oo haddana dhiirigalineynaa dadaalka nabadda ee ay wadaan dadka deegaanku” (dhegayso)
Diseembar 17, 2019 5:07 g 0
Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Dhabancad oo wareysi uu siiyey Radio Daljir uga warramay kormeer isaga iyo wafti uu hoggaaminayaa ay ku tageen degmooyinka Jarriiban iyo Towfiiq ee gobolka Mudug.
Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimuqraadiyadda ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa kormeer hawleed oo labo maalmood qaatay ku tagey degmooyinka Jarriiban iyo Towfiiq ee gobolka Mudug, Puntland.
Kormeerka Wasiirka ayaa waxaa ubuc u ahaa tagidda degmada Towfiiq oo dhawaan ay ka dhacday colaad dhiig badani uu ku daatay, kaddib markii ay dagaallameen labo maleeyshiyo beeleed oo ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug.
Dagaalka ayaa xooggiisu ka dhacay deegaanno miyi ah oo u dhaxeeye Towfiiq iyo deegaanka Afbarwaaqo oo horay loo oranjiray Afgumasooray.
Wasiir Dhabancad iyo masuuliyiintii weheliyey ayaa Towfiiq kulamo kula yeeshay bulshada degmada oo ay ugu horreeyeen maamulka degmada, odayaasha dhaqanka iyo saraakiil ciidan oo deegaanka ah iyo kuwo ka tirsan taliska guud ee ciidamada Puntland.
Kulamada ayaa xooggooda looga hadlay xoojinta nabadda iyo xal-u-hel waara oo lagu afmeero colaadaha soo laalaabtay ee dadyawga deegaanka ee daris wadaagta ah, iyadoo dhinaca kalena la meeleeyey qorshe sal ballaaran oo dawo u noqda ka maadashada mushkilad colaadeed oo gadaal dambe u dhacda.
Wasiir Dhabancad oo maanta kormeerada degmooyinka Jarriiban iyo Towfiiq soo gabagabeeyey ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey Radio Daljir ka warbixiyey safarkiisa
Siyaasadda & Dhaqaalaha 470 Wararka 18827